नेकपा एमाले र माकुनेकाे एमाले (समाजवादी) : कुन प्रदेशमा कसको पल्ला भारी ? - News 88 Post
August 19, 2021 August 19, 2021 N88LeaveaComment on नेकपा एमाले र माकुनेकाे एमाले (समाजवादी) : कुन प्रदेशमा कसको पल्ला भारी ?
काठमाडौं । नेकपा एमाले विभाजन भएर दुई टुक्रा बनेको छ । केन्द्रमा भएको विभाजनको रेखा गाउँगाउँसम्म पुग्ने निश्चित छ । तर पार्टी विभाजन तलसम्म पुग्दा कुन पक्ष बलियो हुन्छ अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । केन्द्रमा रहेका नेताहरुमध्ये अधिकाशं प्रभावशाली नेताहरु केपी शर्मा ओलीको पक्षमा उभिएका छन् ।
यसअघि माधवकुमार नेपाल पक्षमा प्रभावशाली नेताहरुले पनि पार्टी विभाजनसम्म पुग्दा नेपालको साथ छाडेका छन् ।
उनीहरुले विभाजनको पक्षमा उभिन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेकपा एमाले विभाजन भएपछि हामीले प्रदेश स्तरमा कुन पक्ष बलियो छ भनेर केलाउने प्रयास गरेका छौं । यसका लागि हामीले प्रदेश सांसदहरुको संलग्नता र पक्षधरता हेरेका छौं ।
एमाले विभाजनमा माधव नेपाल समूहका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पछि हटे पनि पहिलो तथा चौथो पुस्ता भने एकै ठाउँमा छन् । त्यसैले पछिल्लो समय नेपालले दोस्रो तहका नेताभन्दा पनि तेस्रो र चौथो तहका नेता कार्यकर्तासँग सहकार्य गर्न संवाद गरिरहेका छन् ।
ओलीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न नसकिने देखेपछि माधव पक्षले पार्टी विभाजन गर्ने हेयले पहिल्यैदेखि आफ्ना पक्षका नेताकार्यकर्ता भेलादेखी वडादेखि केन्द्रसम्म समानान्तर कमिटीहरू बनाउँदै आएको थियो ।
समानान्तर संरचनादेखि माधव पक्षका भातृ संगठनहरूको पनि कित्ता क्लियर भैसकेकाले एमालेभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने माधव पक्षको दावी छ । माधव नेपालले पनि पार्टी दर्ता गर्दै निर्वाचन आयोगबाट निस्किएपछि आफूहरू क्रान्तिको बाटोमा हिँड्ने र विचारले नै क्रान्तिकारी पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई प्रवाहित गर्ने वचन दिएका थिए ।
प्रदेश नं १ मा नेकपा एमालेको ५० सांसद छन् । त्यसमध्ये अहिलेसम्म केपी शर्मा ओलीको पक्षमा ३६ जना सांसद देखिएका छन् । नेपालको पक्षमा सात सांसद देखिएका छन् । अन्य सात जना भने तटस्थ छन् ।
यता प्रदेश २ मा भने माधव पक्ष बलियो देखिएको छ । त्यहाँ माधवका १३ सासंद छन् । ओलीतर्फ ८ जना छन् ।
बागमती प्रदेशमा डोरमणी पौडेललाई राजीनामा दिन लगाई ओली पक्षले माधव पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि ओली झनै बलियो भएका छन् । बागमती प्रदेशसभामा एमालेका ५५ सांसदमध्ये २२ जना माधव नेपालमा थिए । अब त्यो संख्या घटबढ हुने देखिएको छ। तटस्थ बसेका ७ लाई पनि ओलीले आफूतर्फ आउन फकाइरहेको बताइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा एमालेमा मनाङबाट निर्वाचित एक स्वतन्त्रसहित २८ जना सांसद् छन्। जसमध्ये प्रदेश सभामा ओली पक्षसँग २७ जना सांसद भएको बताइएको छ। एमालेबाट निर्वाचित नेपाल पक्षधर सांसद इन्द्रलाल सापकोटा विभाजनको पक्षमा देखिएका छैनन्।
ओली र नेपाल दुवै खेमाले नेता–कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा तान्न जिल्ला जिल्लामा भेला लगायतका कार्यक्रम गरेका भए पनि अझै कुन नेता कता जाने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।
गण्डकीबाट ओली पक्षका नेता स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङ छन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना पनि ओली पक्षमै छन्। केन्द्रमासमेत राम्रो प्रभाव भएका गुरुङले नेपाल पक्षका सासंदलाई पनि ओली पक्षमा सामेल गर्न छलफलमा जुटेको स्रोत बताउँछ ।
लुम्बीनीमा पनि माधव पक्ष कमजोर देखिएको छ । त्यहाँ संस्थापन पक्षमा ३७ जना हुँदा माधवतिर २ मात्रै छन्।
कर्णाली प्रदेशमा पनि ओलीकै संख्या हावी छ । एमालेबाट निवार्चित २० सासंदमध्ये त्यहाँ ओलीका सासंद १४ जना हुँदा माधवका २ जना मात्रै छन् । बाँकि ४ जनालाई भने पार्टीले निष्कासन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा ह्विप उल्लंघन गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपपछि चारजना प्रदेशसभा सदस्यलाई एमालेले सांसद र पार्टी सदस्यताबाटै हटाएको थियो । कर्णाली प्रदेशका सांसद प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्बरबहादुर थापा निष्कासनमा परेका छन् ।
उता सुदूपश्चिममा भएका २४ जना एमाले सांसदमध्ये १७ नेपाल पक्षमा थिए । तर, भीम रावल अचानक पार्टी एकता अडानमै रहेको हुँदा त्यहाँको कित्ता क्लियर हुन सकेको छैन ।
नेकपा एमाले विभाजन भैसकेपछि एक्कासी देशको राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको छ । वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरि नेकपा एमाले (समाजवादी) पार्टी नाम राखेर आफैँ अध्यक्ष बनेका छन् ।
एमालेमा माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली गरी दुई खेमा थियो । तर, नेता नेपालले नयाँ पार्टीको जन्म दिएपछि पार्टीका कार्यकर्ता पनि तितरवितर हुने पक्का छ ।
माधव नेपालले गठन गरेको पार्टीमा ९५ जना केन्द्रीय समिति सदस्य भएको दावी गरेका छन् । एमालेको केन्द्रीय कमिटीबाट ५८ जना केन्द्रीय सदस्यहरु आफूहरुसँग रहेको बुधबार नेता राजेन्द्र पाण्डेले जनाएका थिए ।
तथापि पार्टी विभाजनको मुखमै आइसकेपछि माधव पक्षलाई एमाले एकताका लागि जुटेका देस्रो र तेस्रो तहका प्रभावशाली नेताले भने साथ छोड्दै आइरहेका छन् । ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने अष्ट लक्ष्मी शाक्य हिजै मात्रै बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि माधव पक्ष झन् हच्किएको छ ।
उनीहरूको अडान अझै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको औचित्य जोगाउने गरी पार्टी एकतामै रहेको गोकर्ण विष्टले पुष्टि गरेका छन् । यद्दपि दल विभाजन गर्ने पक्षमा २५ सांसद र ५३ केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेको नेपाल पक्षको भनाई छ ।
माधव पक्षमा सासंद कति ?
२०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ जना सांसद बनेका थिए। जसमध्ये एक जनाको मृत्यु भएको छ । एमालेमा पहिल्यैदेखि संसदीय दलदेखी सांसदसम्म ओलीको अत्यधिक बहुमत छ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा विभाजन गरेपछि ४० भन्दा बढी सासंदको साथ नेपालले पाएका थिए। दल विभाजनको संघारमा आइपुग्दासम्म हाल उनका तर्फमा २५ मात्रै सासंद छन्।
नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीभित्र माधव समूहको उपस्थिति नब्बे जनाको हाराहारीमा थियो। तर, अहिले ५३ मा झरेको छ।
२०७१ असारमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित एमालेको केन्द्रीय कमिटी व्युँतिएपछि केपी र माधवपक्षीय नेताको हिसाब बराबरी जस्तै थियो। उसबेला पदाधिकारीतर्फ वामदेव तटस्थ बसेका थिए । तर अहिले गौतमको झुकाव पनि नेपालतर्फ नै छ।
एमाले व्यूतिएपछि अदालतको फैसलाअनुसार, विष्णु पौडेलको महासचिव खोसिएर उनी उपमहासचिवमा फिर्ता भएका थिए । जसपश्चात महासचिवमा ईश्वर पोखरेल छन् । यी दुबै ओली पक्षका हुन् । माधव पक्षबाट घनश्याम भुसाल उपमहासचिव थिए । तर दल विभाजनपछि उनी पनि ओलीतर्फ नै ढल्किने संकेत देखिएको छ ।
संस्थापन एमालेमा पाँच सचिव छन् । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदीप ज्ञवाली बाहेक अन्य तीन सचिव योगेश भट्टराई, भीम आचार्य र गोकर्ण विष्ट माधव पक्षमा थिए । तर, नयाँ दल दर्तापछि यी पाँचै ओलीतर्फ लाग्ने देखिएको छ ।
यस्तै, स्थायी समिति सदस्यमध्ये माधव पक्षमा झलनाथ खनाल, अरुण नेपाल, गंगालाल तुलाधर, नागेन्द्र चौधरी, प्रकाश ज्वाला, पर्शुराम मेघी गुरुङ, प्रदीप नेपाल, भागवत विश्वासी, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, श्रीमाया थकाली, गौरा प्रसाईं, रामप्रित पासवान, विजय पौडेल, रघु पन्त, बेदुराम भुषाल, घनश्याम भुषाल, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, जगन्नाथ खतिवडा, तुलबहादुर गुरुङ, शत्रुघन महतोसहित २२ भन्दा बढी थिए । जसमा पशुपति चौलागाईको मृत्यु भएको छ ।
उता ओलीतर्फ विष्णु रिमाल, कर्णबहादुर थापा, काशिनाथ अधिकारी, गोकुल घर्ति, गोरखबहादुर बोगटी, जगत विश्वकर्मा, दलबहादुर राना, थममाया थापा, विन्दा पाण्डे, भानुभक्त ढकाल, यामलाल कँडेल, राधा ज्ञवाली, युवराज कार्की, योगनारायण यादव, शेरधन राईसहित १६ जना थिए ।
अब, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त, घनश्याम भुषालले माधवको साथ छोडेपछि ओली पक्ष बलियो देखिने भएको छ ।
त्यस्तै, नवौँ महाधिवेशनपछि ४० जिल्लामा अधिवेशन जितेरै माधव पक्षको प्यानलसहित नेतृत्व थियो । केपी पक्षले झापा, पर्वत र दैलेखमा अध्यक्ष जितेको, तर ती जिल्ला कमिटीहरुमा माधव पक्षको बहुमत छ । झापा र धनकुटामात्रै हो, केपी पक्षले प्यानल जितेको थियो ।
तर, अब सातै प्रदेशमा ओलीको वर्चस्व हुने देखिएको छ । तथापि भर्खरै दर्ता भएको नेपालको पक्षमा प्रदेश, जिल्लाका नेताहरू कस्को पक्षमा छन् भन्ने प्रस्ट आधार बनिसकेको देखिदैँन । नेपाल वाचबाट
माकुनेकाे पार्टी सनाखत भएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार, काेकाे बन्दैछन् मन्त्री ?
तयार भयो स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधि, कहाँ कहिलेदेखि कडाइ ? पूर्ण विवरण